Formstack: Kudar Foom DropBox | Martech Zone
Waxaan u adeegsannaa Dropbox maalin kasta si aan u ururino una wadaagno faylasha macaamiisheenna. Waqtiyada qaarkood, macaamiisheennu ma lahan akoon Dropbox ama siyaasaddooda shirkadeed uma oggolaanayso inay isqortaan. Si loo soo ururiyo feylashaas, waxaan kaliya ka sameysaneynaa foom Qalabaynta (kafaaladeena tikniyoolajiyadda) oo ku dar foomka leh DropBox.
Sida Loogu daro Foom DropBox
Isku-darka Dropbox-ka foomkaaga ayaa la jiidayaa oo loo dhigayaa sida inta kale Qalabaynta Isticmaalka fudud.
U soco Settings foomkaaga.
U soco Isdhexgalka Hub.
Dooro Waraaqaha ka dibna Kudar Dropbox.
Oggolaanshaha dalabka, xulo galkaaga waxaadna diyaar u tahay inaad tagto!
Tags: sanduuqa hoos loo dhigofoomka galka faylkafoomamkaxirmoisdhexgalka hubTechfoomka gelinta
Febraayo 25, 2013 saacadu markay tahay 11: 01 AM
Fiican! Waxaan tan ku googooyay Evernote si aan mar dambe tixraaco